Qiimay Qofkaaga: Somaaliland Qaran uu Qof Qiimeeyo! Faallo Xasan Cumar Hoori – Araweelo News Network (Archive)
“Kolba dhagax ayaan rogayaa anigoo ka raadinaya wax cusub.” James M. Buchanan Jr., 1919-2013. James, 1968 waxaa uu ku guulaystay Billadda Noble ee Culuumta Dhaqaalaha isagoo ku mutaystay baadigoobka cilmiyeed ee xidhiidhka dhaqaalaha iyo aqoonta siyaasadda.
Dhinaca kale, abaalmarintu waxay u muuqatay mid deegaan gaar ah. Arrintaas ma ah mid lagu cannaanan karo Rashiid Sulub oo hawsha soo qabanqaabiyay. Waxaan qabaa dadka uu xogta ka soo urruriyay in qof kastaa carrabka ku dhuftay mid ay isku reer yahiin. Mar haddii aan taas sheegay, waxaan ku darayaa, sidaa oo kale, abaalmarintu uma ekeeen mid qaran haddii in ka badan 90% dadka la abaal mariyay ay ka soo jeedeen deegaanka dhexe. deegaanna qaran noqon waa.